Ezona 5 ziPilisi ziHangover eziBalaseleyo [uhlaziyo lwango-2021] - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Ezona 5 ziPilisi ziHangover eziBalaseleyo- Uhlaziyo luka-2021
Ezona 5 ziPilisi ziHangover eziBalaseleyo- Uhlaziyo luka-2021
Ngeepilisi ezininzi zokubambisa ezivenkileni okwangoku, kunokuba nzima ukwazi ukuba zeziphi ezona zisebenza kakuhle.
Iipilisi zeHangover ziindlela ezaziwayo zendalo ezithi zixhasa ukukwazi komzimba wakho ukujongana notywala kunye nokuxhasa ukubuyela kwimeko yesiqhelo. Ngaloo nto, bathembisa ukunciphisa ubunzima be-hangovers ukuze ukwazi ukwenza ngakumbi ngosuku lwakho.
Kodwa ngaba iipilisi ze-hangover zisebenza ngokwenene? kwaye ukuba kunjalo, yeyiphi imveliso ekulungeleyo?
Kolu hlaziyo, siza kujonga ezinye zeepilisi zohlobo lwe-hangover ezaziwayo kwintengiso ngoku.
Zisebenza njani iipilisi zokungxola?
Ngaphambi kokuba singene kuluhlu lwethu lweepilisi ze-hangover, kubalulekile ukuqonda ukuba iipilisi ze-hangover kufuneka zisebenze njani.
Inzululwazi ye-hangovers inzima, ukutsho nje okuncinci. Ngapha koko, izazinzulu aziqinisekanga ncam ukuba kutheni le nto sifumana ihabango. Kodwa xa sithetha nje, kuvunyelwene ukuba ukudityaniswa kwezinto kubandakanya ukomisa, ukudumba, ukuphazamiseka kokulala, ukungalingani kwehomoni, kunye nefuthe ngqo lotyhefu lotywala konke oku kuyabandakanyeka.
Yiyo loo nto ukusela iiglasi ezimbalwa zamanzi kungancedi nto kangako kuba iihangovers azibangelwa nje kukuphelelwa ngamanzi emzimbeni.
Iipilisi zeHangover zipakishwe ngezithako ezinjengeevithamini, iielectrolyte, kunye neeamino acid ezixhasa ukubuyiswa komzimba wakho emva kokusela utywala. Kwaye nangona uphando kwezi mveliso lilinganiselwe, kukho isayensi ethile yokuxhasa amabango abo.
Inqaku elibalulekileyo lokuliqonda kukuba iipilisi ze-hangover aziyinyangi i-hangovers kwaye azikuthinteli iziphumo ezonakalisayo zokusela kakhulu utywala. Kuya kufuneka zibonwe njengoncedo olongezelelekileyo kwisiqhelo sakho sokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Ngale nto ithethwayo, masingene ngqo kwizikhethi zethu eziphezulu.
Iipilisi ezi-5 eziphambili ze-hangover ze-2021
1. Emva kokusela (Ukukhetha kwethu phezulu)
Emva kokusela lukhetho lwethu oluphezulu Kuluhlu lwethu lweepilisi ze-hangover ezilungileyo. Le nkampani ibikumdlalo wothintelo lwe-hangover iminyaka kwaye isekwe kakuhle njengenye yeemveliso eziphambili kwintengiso.
Izithako ezixhaswe yisayensi
I-100% yezithako zendalo kunye nevegan enobungane
Amanani aphezulu ezithako eziphambili (i-DHM, ubisi lobisi, ipeyari yePrickly, iivithamini ze-B, nokunye)
Yenziwe e-US, kwindawo evunyiweyo ye-FDA.
Izibonelelo ezininzi zokupakisha kunye nezaphulelo ezinkulu
Isiqinisekiso sokubuyela imali seentsuku ezingama-30
Kuya kufuneka uthathe iipilisi ezintathu ngokutya ngaphambi kokuba usele utywala kunye nezinye ezi-3 emva kokuba ugqibile ukusela
Iindleko ngeheverver nganye:
$ 4.38 ukuba uthenga ibhotile enye engama-35. Izaphulelo ziyafumaneka ngezibonelelo zeepakethe ezininzi.
Cofa apha ukuthenga i-AfterDrink kwiwebhusayithi esemthethweni.
2. I-DHM Detox nguNoDaysWasted
Njengoko igama libonisa, i-NoDaysWasted yipilisi ye-hangover ethembisa ukunciphisa ubukrakra be-hangover kunye nokugcina imveliso endaweni yokulala imini yonke.
Iza kwipakethi efanelekileyo enokuphinda isebenze onokuhamba nayo kubusuku bakho. Iluncedo ngakumbi ukuba ucwangcisa ukuhlala kumhlobo kwaye ungathandi ukuthatha ibhotile yonke kunye nawe.
Ziipilisi ezimbini ezi-2 ngobusuku bonke ngaphandle
Ukukhetha kakuhle izithako
Thatha 2 njengezingxobo ngaphambi, ngexesha, okanye emva kobusuku bakho
Ibhokisi enye ineepakethi ezili-10. Oko kuthetha ukuba busuku ngabunye ukuphuma kwakho kuyakuxabisa i $ 2.99
Cofa apha ukuthenga iDMM Detox kwiwebhusayithi esemthethweni.
Ngokuqinisekileyo enye yeepilisi ezaziwa kakhulu kwi-market, i-Cheers iholele phambili kwi-brand yayo kunye nodumo. Babekade bebizwa ngokuba bayaphumelela + kodwa kutshanje baphinde babizwa ngegama.
Zinezithako eziqinileyo kunye nemveliso ejikelezwe kakuhle. Ngaphezulu koku, banikezela ngoluhlu lwezinye izongezo zenkxaso yesibindi kunye nemixube yokubuyisa amanzi onokuyithenga kwiinyanda.
Enye yeepilisi ze-hangover ezithandwa kakhulu
Amawakawaka okujonga kwakhona
Nika isiqinisekiso sokubuyiselwa imali ukuba awuziva ubuncinci i-hungover engaphantsi kwe-50%
Izaphulelo ziyafumaneka kunye neenyanda
Thatha iipilisi ezimbini ukuya kwezi-4 emva kwesiselo sakho sokugqibela okanye ngaphambi kokuba ulale.
Ubhavu omnye wobungakanani obuqhelekileyo ubiza i-34,99 yeedola kwaye iqulethe iicapsule ezingama-36 Oko kuthetha ukuba uthatha idosi ephezulu, i-hangover nganye iya kukuxabisa i $ 3.89.
Cofa apha ukuthenga iiCheers kwiwebhusayithi esemthethweni.
I-Flyby yenye yeepilisi zokubambisa ezithandwayo eziye zanceda amawaka abantu ukuba baphinde baphile kwiihangover zabo. Umsunguli wayifumana le mbono emva kohambo oluya eMzantsi Korea apho avavanya khona amayeza okuzibulala. Emva kokukhwankqiswa yindlela abasebenza kakuhle ngayo, wagqiba kwelokuba azenzele eyakhe ipilisi yokubambisa kwimarike yaseMelika.
UFlyby ukusukela oko wandise uluhlu lwemveliso yayo kwiziselo ezinesithintelo sokuthintela, ukubuyisela kwakhona ii-electrolyte, kunye nezongezo zempilo yesibindi.
Thengisa ezinye iimveliso ezongezelelweyo
Thatha iicapsule ezi-3 ngaphambi kokuba usele, kunye nenye ezi-3 ngqo emva kwesiselo sakho sokugqibela (esifana ne-AfterDrink)
Ibhotile enye inezicwecwe ezingama-90 kwi- $ 34.99. I-hangover nganye iya kubiza i-2.33 yeedola.
Cofa apha ukuthenga iFlyby kwiwebhusayithi esemthethweni.
5. Umthi omfusa
Umthi omfusa yinto esondeleyo kwinqanaba lepilisi ye-hangover. Okuyibeka ecaleni kukuba kubiza malini kuba yenye yexabiso eliphantsi kwimarike. Ngaloo nto, ayinalo uluhlu olubanzi lwezithako njengezinye iipilisi ze-hangover kwiimarike. Nangona kunjalo, yimveliso enkulu yokungena ukuba uhlahlo-lwabiwo mali olungqingqwa.
Iipilisi zehangover ezingabizi kakhulu
Inezinto ezininzi ezichasayo
Ifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo
Thatha iipilisi ezi-2-3 ngexesha okanye ngqo emva kokusela utywala.
Ibhotile enye inezipilisi ezingama-60 kwi- $ 19.95. I-hangover nganye iya kubiza i- $ 1 kuphela.
Cofa apha ukuthenga iPurple Tree kwiwebhusayithi esemthethweni.
Ngubani omele asebenzise iipilisi ze-hangover?
Sonke siyazi ukuba i-hangovers iya isiba mandundu ngokuguga. Kuninzi lwethu, iihangovers ziba mandundu ngakumbi kwiminyaka engama-30. Ukuba unqwala xa ufunda le nto, uyazi kakuhle into endiyithethayo.
Ukuba ixesha lifikile ebomini bakho xa i-hangovers iqala ukuba yingxaki ngakumbi kunokuba kufanelekile, isenokuba lixesha lokucinga ngokongeza ipilisi ye-hangover kwikhabhathi yakho yokuncedisa.
Kodwa oko akuthethi ukuba iipilisi ze-hangover ziya kukuthintela ngokupheleleyo ekufumaneni i-hangover. Njengoko besesitshilo ngaphambili, ayizizo iintambo zokunyanga.
Ngale nto ithethwayo, banokwenza umahluko ophathekayo ekubuyiseleni kwakho ukuba ubambelela kuwo onke amanyathelo othintelo lwe-hangover. Oku kubandakanya ukugcina amanzi acocekileyo, ukutya ngaphambi kokusela utywala, kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukusela ngaphakathi kwemida yakho.
Izinto ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuthenga ipilisi ye-hangover
Izithako, ngokude, kubaluleke kakhulu xa kuziwa ekukhetheni ipilisi yokugula yokuthenga. Ngaba iqulethe izithako ezixhaswe yisayensi, kwaye ukuba kunjalo, ngaba idosi yanele?
Unokufumana iipilisi ze-hangover ezinezithako ezininzi kwaye ufumanise ukuba iidosi zincinci kakhulu. Kwaye ukuba iidosi zincinci, isongezelelo sinokungasebenzi.
Ixabiso libaluleke kakhulu kuthi sonke. Ukuya kweyona mveliso ibiza kakhulu akuthethi ukuba kuya kukunika ezona ziphumo zibalaseleyo. Njengesiqhelo, ukubuyela umva uthelekise iifomula zeemveliso ezahlukeneyo sisitshixo sokubona ukuba ufumana elona xabiso liphezulu lemali yakho.
Ukwazi apho ukhetho lwakho lokongeza lwenziwe khona kunokuba kukuqinisekisa. Ngaba yenziwa kwilizwe elinemigangatho ephezulu yolawulo efana ne-US okanye i-UK? Ngaba iziko lemveliso lihambelana nezikhokelo ezifanelekileyo zokwenza imveliso (GMP)?
Uzithatha njani iipilisi zokungxola?
Iimveliso ezichazwe kolu hlaziyo zifuna ukuba uthathe naphi na phakathi kweephilisi ezimbini ukuya kwezintandathu ngalo lonke ixesha usela kwaye usenokuzibuza ukuba kutheni uninzi kangaka?
Uninzi lweepilisi zokungxola zifuna ukuba uthathe iipilisi ezimbalwa (ngaphezulu kwesibini) ngalo lonke ixesha usela. Oku kuhlala kungenxa yokuba ubungakanani obuncinci beephilisi kuthetha ukuba izongezo zifuna iipilisi ezininzi ukuhambisa izithako kwiidosi ezipheleleyo ezidweliswe kwileyibhile.
Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukulandela umkhombandlela, kungenjalo, uya kuthatha idosi ezinokuba zincinci ukuba zibe neziphumo zokwenyani.
Kwelo nqaku, siza kujonga ngakumbi izithako eziphambili zokujonga iipilisi ze-hangover ngokulandelayo.
Ezinye izithako ekufuneka uzijongile
Ukuba ujonga ngononophelo kwizithako ezikwiipilisi zehangover, uya kuqaphela ukuba uninzi lwazo zenziwe ngezicatshulwa zemifuno ezahlukeneyo, iiamino acid, iivithamini kunye neeelectrolyte.
Iipilisi zeHangover zisebenzisa izithako zendalo ukuxhasa amandla okuchaphazela isibindi, kunye nokunyusa amanqanaba e-antioxidant.
Sitshilo ngaphambili ukuba akukho phando lukhulu kunyango lwendalo, ngenxa yoko izibonelelo ezichaziweyo ubukhulu becala zi-anecdotal.
Inkunkuma yobisi - Inkxaso yezempilo yendalo yesibindi. USilymarin sisithako esisebenzayo.
Iparickly pear Ipakishwe ngama-polyphenols ane-antioxidant
Dihydromyricetin - Kwaziwa njenge I-DHM sisixhobo esithandwayo sepilisi esirhabaxa kunye neempawu kuzo zonke iimveliso ezichazwe kolu hlaziyo.
Ijinja - Iyeza lendalo lokuthintela isicaphucaphu
IGinseng - Ipakishwe ngamaginsenosides atyebileyo e-antioxidant
Ukukhupha ipepile emnyama - Yandisa ukufunxwa kwezondlo ezithile ezisuka emathunjini.
I-acetyl-cysteine ​​- Ingaphambili kwi-glutathione ene-antioxidant enamandla
Ialpha-lipoic acid - I-antioxidant yendalo
Vitamin C kunye no-E - Iivithamini Antioxidant
Iivithamini B - Inkxaso yemetabolism eqhelekileyo
Izinto zokulandela umkhondo (iZinc, Magnesium, Chromium) - Ii-cofactors ezibalulekileyo kwiinkqubo ze-metabolic
Caffeine - Yinto evuselelayo enokusingxola isisu sakho ukuba sele uziva unesiyezi. I-Caffeine ikwayi-diuretic nto leyo ethetha ukuba inokwandisa ukomisa emzimbeni kwaye isenzo sayo esivuselelayo sinokukushiya ujittery kwaye ungathembi ukulala.
Iifilitha ezingezizo / imibala - Inqaku elichazayo. Ezona pilisi zibukrakra azinqumli iikona kwaye zipakisha kuphela izinto eziyimfuneko kwiifomsile.
Zingakanani iipilisi ze-hangover zinceda ngokwenene?
Into wonke umntu afuna ukuyazi ngaphezulu kwayo yonke enye into yile; Ngaba iipilisi ze-hangover ziyasebenza ngokwenene? kwaye basebenza kangakanani?
Ukuba ujonga uphononongo lweepilisi ze-hangover ezikhankanywe kweli nqaku, uya kuqaphela ukuba kukho amawaka abantu abaziva bengcono emva kokuzithatha. Phakathi kwabo, baninzi nabantu abangaboni zibonelelo zininzi konke konke.
Njengazo zonke izongezo (kunye namayeza), zisichaphazela ngokwahlukileyo sonke. Ekuphela kwento eqinisekileyo kukuba iipilisi ze-hangover azinyangi i-hangovers okanye zikhusele umzimba wakho kwiziphumo ezonakalisayo zokusela utywala kakhulu.
Kodwa ukuba ufuna ukuzama nantoni na ukuze uzive ungcono emva kokusela, iipilisi ze-hangover lutyalo-mali oluncinci olunokunciphisa kakhulu ubuzaza bakho.
Sifake kuphela iipilisi ze-hangover ezenziwe kwizinto zendalo kwaye zinegama elihle kolu hlaziyo. Ke ngoko, zihlala zinyamezeleka kakuhle ngeeprofayili zecala elisezantsi.
Kodwa zonke ziqulathe indibaniselwano yezicatshulwa zemifuno onokuthi ungakhange uboniswe ngaphambili, kusoloko kukho ithuba lokuba isithako esinye okanye ezingaphezulu zisenokungahlali nawe.
Ngokwendalo, kukho umngcipheko omkhulu weziphumo ebezingalindelekanga ukuba sele uthabathe amanye amayeza anokusebenzisana. Kungenxa yoko le nto kufuneka usoloko uthetha nogqirha wakho ngaphambi kokuzama isongezelelo esitsha.
Ukuba uneziphumo ebezingalindelekanga, ungaphinde uzithathe kwaye uthethe nogqirha wakho.
Iindawo zokuthenga iipilisi ze-hangover
Uninzi lwezincedisi eziboniswe kolu luhlu ziyafumaneka ukuze zithengwe kwiiwebhusayithi ezisemthethweni zokuvelisa iimveliso, kwaye ezinye ziyafumaneka nakwabanye abathengisi abakwi-Intanethi abanjengoGNC, iCVS, kunye neeWalgreens.
Enye yeenzuzo zokuthenga isongezelelo kwiwebhusayithi esemthethweni kukuba unokuqiniseka ukuba uya kufumana imveliso yokwenyani neyinyani. Ngaphezulu koku, kunokwenzeka ukuba ufumane ezona zivumelwano zibalaseleyo kunye nonikezelo olukhawulezayo.
IAmazon lolunye ukhetho olufanelekileyo njengoko inkonzo yabo ephambili yokuhambisa ingenakuthelekiswa nanto.
Iipilisi zeHangover vs iziselo, iipatches, kunye ne-IV idriphu
Mhlawumbi ubonile zonke iintlobo ezahlukeneyo zento ekuthiwa yinyango yehabango ejikeleze. Ukusuka kumaziko ezempilo aya kukutsala ukuya kwi-fluorescent IV drip, iivithike, kunye neziselo.
Zonke izinto onokukhetha kuzo zinezinto ezahlukeneyo ezintle nezingalunganga, kodwa kuthi, iipilisi ze-hangover zezona zilungele ukuhambisa idosi ephezulu, zezona zibiza kakhulu, kwaye ekugqibeleni zisebenza ngokusemgangathweni.
Ekupheleni kosuku, ikakhulu iza phantsi kukhetho lwakho kwaye unokufuna ukuzama iimveliso ezahlukeneyo ukubona ukuba yeyiphi eyona nto ikusebenzayo.
Nokuba ukhethe ukuya kwipilisi yokuncedisa, isiselo, okanye isiziba, kuhlala kubalulekile ukujonga kwifomula yezithako ukujonga ukuba inezithako ezisebenzayo na.
Ungalufumana njani uncedo kakhulu kwiipilisi zohlobo lwe-hangover
Siye satsho kuyo yonke into yokuba iipilisi ze-hangover aziyonyango engummangaliso. Ukufumana okuninzi kubo, usafuna ukusela ngaphakathi kwemida yakho kwaye wenze yonke enye into onokuyenza ukuthintela ukuvuka nge-hangover. Oku kubandakanya:
Sela amanzi aneleyo - Wonke umntu uyazi ukuba ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni yenye yezizathu ezibangela ukuba abaleke. Kungenxa yokuba utywala ngumchamo oko kuthetha ukuba kwenza izintso zakho zityhale amanzi ngaphandle. Ke ngoko, ukuthatha ikhefu rhoqo kubalulekile.
Kuphephe ukusela imimoya emnyama - Iwayini ebomvu kunye ne-whisky hangovers zaziwa ngokungalunganga. Kwaye kukho isizathu esihle sayo. Zinezinto eziphezulu zokuzalwa eziye zaboniswa kwizifundo zokwenza ukuba iihangovers zibi ngakumbi. I-Congeners iyenziwa xa utywala budala ngemiphanda kunye nangexesha lokuvumba yiyo loo nto bengcamla njengoko besenza. Kodwa ngelishwa, ziindaba ezimbi zabangcangcazelisi ke ngoko jonga ukutshintshela kwiziselo ezilula.
Yitya ngaphambi kokuba usele utywala Sonke sinaye lowo mhlobo uphuma ngaphandle kokutya kwaye ungowokuqala ukushiya ipati. Utywala bufunxwa ngokukhawuleza kakhulu emathunjini akho ukuba awunanto nto leyo eza kukwenza unxile ngokukhawuleza okukhulu. Njengoko besitsho, ukucotha kunye nokuzinza kuphumelela ugqatso kunye nokutya ngaphambi kokusela ngumba ophambili koku.
Ukulandela le mithetho ngokudibeneyo nokuthatha ipilisi yakho yokubaleka kuya kukunika elona thuba lilungileyo lokuvuka uziva ungumntu.
Oko kugqibezela uphononongo lwethu lweyona pilisi zibukrakra kwiimarike ngoku. Siye sahamba kuwo onke amanqaku abaluleke kakhulu ukuba ukhangele kwaye asebenza njani.
Njalo khumbula ukuba iipilisi ze-hangover azithathi indawo yokuziphatha ngokusela. Oko kuthetha ukuba, qiniseka ukuba awuxubeki iziselo zakho, kunqande ukwenza iifoto kunye nokusela kwisisu esingenanto kunye nokugcina amanzi kakuhle.
Ukuba ii-hangovers ziya zinganyamezeleki kwaye ujonge iyeza lendalo ukukunika uncedo olongezelelekileyo, iipilisi ze-hangover zinokuba yimpendulo.
Ngale nto ithethwayo, awungekhe uhambe gwenxa ngayo nayiphi na imveliso esiyikhethileyo kolu hlolisiso lwepilisi yehabango.
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nama-91 e-Academy Awards
URichard Williams Unqwenela ukuba umhlaba ungasekho Mnyama nakuMhlophe
Imiyalelo kaGqirha: Ukwabelana ngesondo kwandisa uMgangatho kunye nobungakanani beMinyaka yakho
Olona luhlu luhle kwi-Intanethi
robert greene incwadi entsha 2017
Izinto ezintsha ezenziwe ekhaya umoya opholileyo womoya opholileyo
ukungaziva buhlungu ngokweemvakalelo